Facebook တွင် See conversion/ ဖောင့်ပြောင်းကြည့်ပါ ဇွတ်ဖော်နည်း နည်းလမ်း(၁) နှင့် နည်းလမ်း (၂)
Posted by Ko Hset Gyi on June 20, 2017
အောက်မှာပြောထားတဲ့ လုပ်ပုံလုပ်နည်းကို ကိုသန့်သက်ရေးထားတဲ့အတိုင်း တစ်လုံးမလွဲ ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Fb မှာ See Conversion / ဖောင့်ပြောင်းကြည့်ပါ မပေါ်တဲ့သူတွေ translation ကို Burmese ရွေးမရတဲ့လူတွေအတွက်ပါ။ လုပ်တာကတော့ browser ထဲမှာလုပ်ရပါမယ်။ လုပ်ပြီးသွားရင် app မှာ logout လုပ် login လုပ်လို့ ကံကောင်းရင်တော့ See Conversion ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်။
1. https://touch.facebook.com/ ကို Browser မှာဖွင့်ပြီး login လုပ်ပါ (Chrome Browser မှာစမ်းထားပါတယ်)
2. https://touch.facebook.com/settings... ကိုသွားပါ (ဒီက copy ကူးဖို့ အဆင်မပြေရင်http://pastebin.com/9zsws2wY ကိုဖွင့်ကူးပါ)
5. Facebook app မှာ logout လုပ်ပါ login ပြန်လုပ်ပါ
6. ဆုတောင်းပါ :P See Conversion ရပါပြီ။
Big Thanks to Ko Thant Thet
လုပ်ပုံလုပ်နည်း ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီး အဆင်ပြေပြေ လုပ်နိုင်ကြပါစေဗျာ။
အကယ်၍များ အပေါ်မှာ ပြောထားတဲ့ နည်းက နည်းနည်းခက်နေတယ် အဆင်မပြေဘူး ဆိုရင် နောက်တစ်နည်း ရှိပါသေးတယ်။
လုပ်ပုံလုပ်နည်းက လည်း ကြည့်ရင်ခက်သလိုလိုနဲ့ အရမ်းလွယ်ပါတယ်
အောက်က ဗီဒီယိုဖိုင် လေးကို ကြည့်ပါ။
ဒီနည်းက တော့ ကိုသစ်ပင်(Thix Pin ) အား ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်
အပေါ်ကနည်း လမ်းနှစ်ခုလုံးကို မလုပ်တတ်ဘူး ၊ အဆင်မပြေသေးဘူးဆိုရင် နည်းလမ်း(၃) ရှိပါသေးတယ်။
အောက်ကလင့်ကနေ နည်းလမ်း (၃) ကို ကြိုးစားကြည့်ပါဉီး